इलिनोइस वीड कानूनहरू - इलिनोइस सीआरटीएमा भांगको व्यक्तिगत प्रयोग र कानूनीकरण
कानूनीकरण २०२० मा इलिनोइस झार सम्बन्धी कानूनहरू परिवर्तन गर्दछ - तपाईले कति सम्पत्ति पाउन सक्नुहुन्छ वा बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न सक्नुहुन्छ - हामी आईएलमा होम ग्रोथ र वैधानिकताका मामिलाहरूको वर्णन गर्दछौं। तपाई इलिनोइसमा कतिवटा बिरूवाहरू बढ्न सक्नुहुन्छ?
कानूनी भांग उद्योगमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ?
नयाँ इलिनोइस वीड कानूनहरूले इलिनोइसमा भांगको व्यक्तिगत प्रयोगको बारेमा के भन्छन्?
इलिनोइसमा मे 31१, २०१ 2019 मा मनोरंजन मारिजुआनाको प्रयोगलाई कानुनीकरण गर्ने नयाँ कानून पारित गरियो। मनोरञ्जन मारिजुआना प्रयोग गर्नका लागि राज्यमा देशको ११ औं स्थान छ तर विधायी प्रक्रियाबाट भांगलाई वैध बनाउने पहिलो राज्य हो।
यो नयाँ भांग कानून अनुसार, "महासभाले भेटे र घोषणा गर्‍यो कि भांगको प्रयोग २१ वर्ष वा सो भन्दा बढि उमेरका लागि कानुनी हुनुपर्दछ।"
इलिनोइस झार कानून
तल हामी नयाँ छलफल गर्दछौं इलिनोइस झार कानून जुन अब १ जनवरी २०२० देखि प्रभावी हुनेछन्, र त्यस पछि पनि। याद गर्नुहोस् कि क्यानबिस कानूनहरू द्रुत रूपमा विकसित हुन्छन्, त्यसैले इलिनोइसमा हालैको भव्य कानुनहरूको लागि सधैं फेरि जाँच गर्नुहोस्।
इलिनोइससँग मारिजुआना कानून छैन
इलिनोइसले "मारिजुआना" भन्ने शव्द धेरै वर्ष अघि यसको जैविक नाम, क्यानाबिससँग प्रतिस्थापित गर्‍यो। निषेधको क्रममा पनि, इलिनोइसले गाँजालाई भांगको रूपमा संकेत गर्थे। त्यो नयाँ इलिनोइस क्यानाबिस रेगुलेसन र कर ऐनको साथ आज जारी छ।
भांग बेच्न कसलाई अनुमति छ?
२०२२ जनवरीमा कानून लागु भएपछि सुरुमा केवल इजाजतपत्र प्राप्त औषधिचिकित्सालाई मेडिकल गाँजा बेच्न अनुमति दिइनेछ। अधिक लाइसेन्स वर्षको बीचमा अन्य पसलहरूलाई दिइनेछ।
पहिले नै राज्यको विभिन्न भागमा राम्रो संख्यामा औषधालयहरू छन्। २०२० को सुरूवातमा, यो अनुमान गरिएको छ कि करीव stores०० स्टोरहरूले मारिजुआना बेचिनेछ।
जे होस्, यो अझै पनी नगरपालिका र काउन्टी सरकारमा निर्भर गर्दछ कि मारिजुआना बिक्रेताहरू उनीहरूको कार्यक्षेत्रको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्।
तपाईं कहाँ गांजा धूम्रपान गर्न सक्नुहुन्छ?
नयाँ कानूनका अनुसार घर र गाँजा विक्रेताहरूको परिसरमा भांग पिउने अनुमति दिइनेछ। यद्यपि, निम्न क्षेत्रहरूमा धुम्रपान प्रतिबन्धित हुनेछ:
सार्वजनिक क्षेत्रहरू, जस्तै सडक र पार्कहरू
मोटर वाहनहरूमा व्यक्तिगत वा अन्यथा
पुलिस कार्यालयहरू नजिक, वा स्कूल बस चालकहरूको नजिक जो अझै ड्युटीमा छन्
स्कूल सेटिंग्स भित्र। जे होस्, चिकित्सा मारिजुआना को मामला को लागी छुट छ
२१ वर्षमुनिका जो कोहीको पनि नजिक
जबकि तपाईंको घरको सिमानामा गाँजा धूम्रपान गर्ने अनुमति छ, सम्पत्ति मालिकसँग उनीहरूको परिसर भित्रै निषेध गर्ने अधिकार छ। कलेज र विश्वविद्यालयहरूले पनि संस्था भित्र झारपात धूम्रपान निषेध गर्न पाउने छन।
झारको मात्रा एकले लिन सक्ने
कानुनका अनुसार इलिनोइसका बासिन्दाहरूलाई grams० ग्राम भांगको फूल, grams ग्राम भांग गाढा र 30०० मिलीग्राम गाँजा सम्मिश्रित उत्पादनहरू लिन पाउने छ। क्यानाबिस संचार उत्पादनहरूमा टिन्चरहरू र खाद्यहरू सामेल छन्।
बिक्री कर सबै मारिजुआना उत्पादनहरूका लागि लागू गरिनेछ। उदाहरण को लागी, उत्पादनहरु को THC 35 10% भन्दा कम छ को एक बिक्री कर हुनेछ 20%। खाद्य र कुनै पनि भांग संचारित उत्पादहरू २०% मा कर लगाइनेछ। TH 35% भन्दा बढीको THC एकाग्रता हुने उत्पादनहरूको बिक्री कर लगभग २%% हुनेछ।
बिक्री करलाई बाहेक, उत्पादकहरूले औषधालयहरूमा बेच्ने गाँजामा%% कुल कर लगाइनेछ। यो धेरै सम्भावना छ कि दिनको अन्त्यमा, यो लागत उपभोक्तालाई दिइनेछ।
बिक्रीको लागि भांग कहाँबाट आउँछ?
हाल, इलिनोइसमा २० मारिजुआना खेती सुविधा छ। जनवरी २०२० को सुरुमा, यी केवल सुविधाहरू हुनेछन् जुन गाँजा उब्जाउन अनुमति दिइनेछ। वर्ष भित्र, शिल्प उत्पादकहरु बढ्दो मारिजुआनामा रुचि उनीहरूको इजाजतपत्र आवेदनहरू सबमिट गर्न अनुमति दिइनेछ। Facilities००० वर्ग फिट झारसम्म बढ्न सक्ने सुविधाहरूलाई लाइसेन्स दिइनेछ।
तपाई इलिनोइसमा कतिवटा बिरूवाहरू बढ्न सक्नुहुन्छ?
चिकित्सा उद्देश्यको लागि मारिजुआना लिनेहरूका लागि मारिजुआना खेती कानूनी हुनेछ।
Thee बिरामीहरुलाई कुनै पनि समयमा ma गाँजा बिरुवा हुर्काउन अनुमति दिइनेछ।
अर्कोतर्फ, मनोरञ्जनात्मक मारिजुआना प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको घरमा मारिजुआना रोक्न अनुमति छैन।
त्यसो गर्नाले २०० $ को जरिवाना जरिवाना आउँछ।
इलिनोइसमा क्यानाबिस बढ्नको लागि अनुमति छ
यदि तपाईं मेडिकल भांग कार्यक्रमको करुणायुक्त प्रयोग अन्तर्गत दर्ता हुनुहुन्छ, र कानून द्वारा निर्धारित उमेर सीमा भित्र छन् भने, तपाईं गाँजा बढ्न को लागी योग्य हुनुहुन्छ। घरमा पनि झार बढ्नको लागि तपाईलाई पनि यस राज्यको वासिन्दा हुन आवश्यक छ। यस कानून अनुसार, एक निवासी छ "एक व्यक्ति जो राज्यमा omic० दिनको लागि अधिवासमा रहन्छ।"
यदि तपाईं गाँजा बढ्नुहुन्छ भने, तपाईंले बिरुवाहरूको लागि हेरविचार गर्नु पर्छ। तपाइँसँग एजेन्टले तपाइँको लागि छोटो अवधिको लागि जब यो टाढा हुन्छ। त्योले भने, बिरूवाहरू पहुँच गर्न वा अन्य अनाधिकृत मानिसहरूले प्रयोग गर्न हुँदैन।
इलिनोइसमा गृह बढ्दो भांग?
कानून अनुसार गाँजा बिरुवाहरू संलग्न र ताल्चा लगाइएको ठाउँमा हुर्काउनुपर्नेछ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि बोटहरू अनधिकृत व्यक्तिले पहुँच गर्न सक्दैनन्। यो सार्वजनिक ठाउँमा सजीलो पहुँच गर्न सक्ने ठाउँमा बोट बिरुवा गर्न अवैध हुनेछ।
थप रूपमा, गाँजा बिरुवा बढ्नको लागि दर्ता गरिएको जो कोहीले छिमेकी, मित्र, वा यसका लागि कुनै पनि अन्य व्यक्तिलाई बिरूवा वा कुनै पनि भांग-संक्रमित उत्पादन दिन प्रतिबन्धित छ। यो गर्नाले सजाय मात्र आकृष्ट हुँदैन, तर बढ्दो घरको त्याग गर्न पनि अग्रसर गर्दछ।
भांगको बीउ कहाँ पाउने?
मारिजुआना बिउ बिभिन्न डिस्पेंसरहरुमा मारिजुआना उत्पादन बेच्न लाइसेन्स प्रदान गरिने छ। यो अर्को व्यक्तिको तर्फबाट बीउ किन्न अवैधानिक हुनेछ। केवल करुणायुक्त प्रयोग अन्तर्गत दर्ता भएकालाई बीउहरू किन्न र लाइसेंस बिना गांजा बिरूवाहरू उत्पादन गर्न अनुमति दिइनेछ।
२१ बर्ष मुनिका व्यक्ति द्वारा भांग प्रयोग र कब्जा
नयाँ कानून अनुसार २१ बर्ष भन्दा कम उमेरका जो कोहीले भांग लिनु भनेको आपराधिक अपराध हुनेछ। त्यस्ता अपराधहरूका लागि सजाय हातमा रहेको परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ, र समावेश हुन सक्छ:
ड्राइभिंग इजाजतपत्र खारेज गर्ने व्यक्ति यदि उसले कुनै अपराध गरेको बेलामा गाडी चलाइरहेको छ
$०० भन्दा कम भन्दा राम्रो
जेल अवधि यदि मारिजुआनाको प्रभावमा हुँदा अरू अपराधहरू भएका छन् भने
जब तपाइँ मारिजुआना उत्पादनहरू खरीद गर्दा तपाइँको उमेर प्रमाणीकरण गर्न पहिचान कागजातहरू उत्पादन गर्न आवश्यक पर्दछ, तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी गोपनीयता उद्देश्यका लागि सुरक्षित गरिनेछन्। विक्रेताहरूलाई तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी रेकर्ड गर्न आवश्यक छैन। यदि तिनीहरूले त्यसो गरे भने, उनीहरू पहिले तपाईंको सहमति लिनु पर्छ।
एक पटक यो विधेयक कानून बन्ने भएपछि, मनोरन्जन वा चिकित्सा उद्देश्यका लागि मारिजुआना लिन चाहनेहरूसँग आवश्यक गाँजा उत्पादनहरू पाउन सजिलो समय हुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो पैसाको लागि मूल्य पनि प्राप्त गर्नेछन् किनभने सबै व्यापार लेनदेन कानून बमोजिम गरिन्छ।
जे होस्, जो २१ बर्ष भन्दा कम उमेर भन्दा कम छन् उनीहरूले मारिजुआना, वा यसका कुनै पनि सम्बद्ध उत्पादनहरू प्रयोग गर्न वा राख्नु हुँदैन किनभने यसले उनीहरूलाई कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूसँग समस्यामा ल्याउन सक्छ।